Orinasa milina fitaratra misy laminated China ary mpanamboatra | LYDGLASS
Endri-javatra ny vera voadio
1. fiarovana avo lenta tokoa: ny mpifanerasera PVB dia mahatohitra ny fidiran'ny vokany. Na vaky aza ny vera dia hifikitra amin'ny interlayer ny maratra fa tsy hiparitaka. Raha ampitahaina amin'ny karazana fitaratra hafa, ny vera voahodina dia manana tanjaka lehibe kokoa hanoherana ny hatairana, ny vaky trano, ny fipoahana ary ny bala.
Fitaovana fananganana 2.Energy famonjena: ny interlayer PVB dia manakana ny fifindran'ny hafanan'ny masoandro ary mampihena ny enta-mavesatra.
3. Mamorona fahatsapana hatsarana ho an'ny tranobe: ny vera vita amin'ny laminated miaraka amina interlayer miloko dia handravaka ireo trano ary hampifanaraka ny endrik'izy ireo amin'ny fomba fijery manodidina izay mahafaly ny fangatahan'ny mpanao maritrano.
4.Fifehezana ny feo: mpandray feo an-tsehatra PVB dia mpandray feo mandaitra.
Fizahana 5.Ultraviolet: ny interlayer dia manala ny taratra ultraviolet ary manakana ny fanaka sy ny ambain tsy hisy vokany
Sarimihetsika matevina sy miloko vera misy vera inona no atolotrao?
Sarimihetsika PVB ampiasainay Dupont any Etazonia na Sekisui any Japon. Ny lamination dia mety ho vera misy harato vy, na vato sy ny hafa hahatratrarana fomba fijery tsara indrindra. Ny loko amin'ny sarimihetsika dia misy mangarahara, ronono, manga, volondavenona, maitso maivana, varahina, sns.
Matevina ny PVB: 0.38mm, 0.76mm, 1.14mm, 1.52mm, 2.28mm, 3.04mm
Hatevin'ny SGP: 1.52mm, 3.04mm ary zazalahy hafa
Interlayer: 1 layer, 2 layer, 3 layer ary maro hafa arakaraka ny zavatra takinao
Lokon'ny sarimihetsika: Mangarahara be, ronono, manga, volondavenona, maitso mavana, varahina, sns.
Layers ： sosona maromaro araka ny angatahinao.
Inona ny vera voasarimakirana matevina sy habe azonao omena?
Malaza matevina vera misy laminated: 6.38mm, 6.76mm, 8.38mm, 8.76mm, 10.38mm, 10.76mm, 12.38mm, 12.76mm sns.
6mm + 0.76mm + 6mm sns, azo novokarina isaky ny fangatahana
Haben'ny vera voamarina laminated:
Azontsika atao ihany koa ny manamboatra vera voalamina laminated miolakolaka sy vera voaravaka laminated tempered.
Teo aloha: Vera fanamarinana bala
Manaraka: 6mm tezitra Glass ho an'ny lalantsara alimina sy sisin-tany
Fitaratra misy laminated 10.38mm
6.38mm vera lamianted
Fitaratra laminated 6.76mm
8.38mm vera voamarina
Vera voalamina ho an'ny lalamby
Ny vera misy vera misy laminated